Xubintii Ciyaaraha iyo cRx Yameni: Manchester United iyo Yaa Kale? (dhegayso) – Radio Daljir
Agoosto 27, 2017 1:48 b 0
Waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsana horyaalka Ingiriiska oo ah midka dunida ugu xiisaha badan. Kooxda Manchester United ayaa ilaa iyo biloowgii horyaalka dhulka la dhigi la’ayahay, waxayna sannadkaan ku guulaysanaysaa kulammo y sannadkii hore barbardhac ahaan jireen. Laakiin weli waxaa soo foolleh kulamo kale oo ayana xiiso badan.
Dhanka horyaalka Spain, kooxda Barcelona ayaa u muuqata in ay ka soo kabsanayso guuldarooyin is xigxigay oo ay kala kulantay kooxda ay sida wayn u xifaltamaan ee Real Madrid. Isla kooxda Real Madrid ayaa asbuucaan mari doonta mid kamid ah tijaabooyinka ugu adkaa xili ciyaareedkan.